Day: Mee 10, 2020
Ikike ikike maka ọgwụ ụlọ KOVİD-19
Ministri Ahụike nyere ikike ịre ọgwụ ọgwụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na mpaghara mepụtara maka ịgwọ coronavirus (COVID-19). Onye isi ala Ozi Nkwukọrịta Onye isi ala Fahrettin Altun’s government social media account [More ...]
Ọnọdụ Corona bidoro ịrị elu na Germany
Mmụba nke ọrịa corona ụbọchị ole na ole mgbe mmachibido mmekọrịta mmadụ na ibe ya malitere na Germany, welitere nchegbu na ọrịa ahụ nwere ike kwụsịlata ọzọ. N'ime akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị nke Kolọ Ọrụ Ahụ Ọrịa Robert Koch, [More ...]
Iko ụgbọ elu Ikolo ụgbọelu Istanbul TBM Tunnels Mmecha Ememe
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru na ha ga-aga n'ihu n'ọsọ ọrụ ruo mgbe ha nwụrụ. Erdogan gara Gayrettepe-Kagithane Istanbul Airport Metro Project TBM Tunnels Mmeme Mgbakọ na vidiyo. Site n'okwu Erdogan [More ...]
Onye isi oche Aktaş Asphalt Ndị ọrụ mere Sahur
Obodo Bursa mepere emepe gbanwere usoro iwu eji abanye na ngwụsị izu n'ihi ntiwapụ nke nje corona ka ọ bụrụ ohere wee bido ịkwalite asphalting na akwara akaghị agba ọhụrụ kemgbe afọ 15-20. [More ...]
Turkey AVM Mgbe m na-ezute na Culture?
Mall omenala maka Turkey mbụ malitere na 1987 na Galleria Mall. Mgbasa a gara n'ihu na Capitol AVM mepere na 1993. Turkey kasị ukwuu shopping malls Nke a 14 AVM'si [More ...]
Ndozigharị na-aga n’ihu na Nnukwu Istanbulgbọ Ahịa Istanbul
IMM na-aga n'ihu na-atụgharị ịgagharị obodo ahụ ka ọ bụrụ ọrụ n'ihi mmachi mgbochi. Ejikwazi mmezi, ndozi ya na ihe mmeghari ohuru na Greater Istanbul Bus Terminal, nke eleghaara anya kemgbe nkeji iri na otu nke narị afọ gara aga. [More ...]
Alegbọ njem maka May 11 site na IMM! Soro Walgagharị ma ọ bụ Bik keke
Obodo isi obodo Istanbul, dọrọ aka na ntị gbasara iwu ga - ebido na Mọnde, Mee 11. IMM na-eji ugbo ala nkeonwe na Istanbul, mana nke ka mkpa, n’ihi na ọtụtụ azụmaahịa ga-arụ ọrụ ọzọ. [More ...]
Kedụ mgbe njem ụgbọ njem YHT ga-amalite?
TCDD Tasimacilik emechaala otu na nkwadebe akụrụngwa iji malitegharịa ọrụ Nnukwu Ọgba Ọsọ (YHT), nke kwụsịtụrụ n'ihi ntiwapụ coronavirus; Ichere nbanye site n'aka Ministri Transportgbọ njem na akụrụngwa Olcay Aydilek nke Habertürk [More ...]
Gendarmerie na ndị ọrụ ndị ọrụ nchekwa Coast ga-erite uru site na Ọha ụgbọ njem Ọha n'efu
Emezigharịrị mkpebi a na-ahazi iji ọrụ ụgbọ njem ọha n'efu. Dika mmeghari a si kwuo, ndi gendarmerie na ndi nche nche ga ano kwa erite uru na oru njem ugboala nke ndi n’enweghi ego. [More ...]
Onu ogugu nke bulstanbul AVM 2020
Istanbul, Turkey n'ozuzu sürdüy ihe ùgwù nke ịbụ obodo ndị kasị AVM'si. Enwere ngụkọta nke 125 na Istanbul. A na-eme atụmatụ ịmepe nnukwu ụlọ ahịa ọhụrụ na Istanbul na 2020. Ndị a bụ 10lọ Mpepụ XNUMXzụ XNUMX dị na Istanbul [More ...]
Oriakụ Zübeyde bụ emume ncheta ụbọchị ndị nne
Onye isi obodo ukwu nke Izmir Metropolitan Tunç Soyer, onye bịara emume ncheta ahụ na Zübeyde Hanım Memorial Tomb na Motherbọchị Ndị nne, kwuru, "Taa anyị nọ ọnụnọ mmụọ nke nne anyị kachasị ukwuu." N’imesi ike na icheta nne naanị otu ụbọchị [More ...]
Ọnye na-bụ Süleyman Karaman?
Süleyman Karaman (1956, Alaçayır Village, Refahiye) bụ injinia nke rụkwara ọrụ dịka onye isi njikwa TCDD. Ndụ Mmụta Mgbe ọ malitesịrị ndụ agụmakwụkwọ ya na Erzincan, ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị Istanbul Pertevniyal maka agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị. [More ...]
Ole na ole E nwere ụlọ ahịa ebe a na Turkey?
Na Turkey, e nwere ugbu a na a ngụkọta nke 436 iberibe Mall. Allslọ ahịa na-ere ahịa na-enye aka na akụ na ụba na mpaghara 13,2 mpekere mpere. Mpaghara ahia, nke na-abawanye kwa ụbọchị, nwere nkezi 2020 dịka njedebe nke 445. [More ...]
Nnyocha siri ike site na Izmir Obodo ukwu gaa ụlọ ahịa!
Ndi isi obodo Izmir kwuru na iwu aga esoro nwayọ maka ntiwapụ nke Coronavirus, nke a ga-etinye n'ọrụ nwayọ na Mee 11. Ndị otu ndị uwe ojii nke Obodo Metropolitan ga-amalite nyocha na Mee 11. Obodo Izmir [More ...]
304gbọ XNUMX ọzọ ga-eso na ESHOT Fleet
Ndi isi obodo Izmir na achoro ugbo ala 134, gunyere ndi 170 na 304 solo. A ga-ebunye ugboala ndị ahụ n’ime ọnwa iteghete ka emechara nkwekọrịta ahụ. Obodo Izmir nke ụgbọ ala, ụgbọ ala ụgbọ ala [More ...]
Nkwado Hygiene maka Barber na Hairdressers
Obodo İzmir nke Mọniko ga-enyere ndị na-akpụ isi na ndị na-akpụ isi aka iji kwado ịdị ọcha, nke a ga-emepe emepe na Mee 11 n’ahịrị na okirikiri Ministri nke ime. Otu Protectionzmir nke Obodo Ime Nchebe Gburugburu Ebe Obibi na Njikwa Ala na-ere otu otu [More ...]
Ọrụ Nduzi maka ụmụ akwụkwọ 19 nde na ndị nne na nna na-agbakọ 'Covid-12,5' site na MEB
N'ime oge coronavirus, a na-enye ụmụ akwụkwọ na ndị nne na nna ndụmọdụ ngụkọta nke nde 1,5 nde 12 na ndị nne na nna n'ime ọnwa 500. Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ nke mba Ziya Selçuk kwuru, 'Site na ịnye ọrụ ntuziaka a zuru oke [More ...]
A Kpebisiri ike cipleskpụrụ nke Nkwado Raw Milk maka Afọ 2020
Ihe dị iche iche a ga na-enye ndị na-emepụta mmiri ara ehi a na-enye ara ehi n’afọ a na usoro ahịa mmiri ara ehi doro anya. Mkpebi Onyeisi ahụ na nkwado nke Raw Milk Raw na Regulation nke Milk Market a ga-eme n’afọ 2020, Ndị isi [More ...]
Nzukọ nzukọ ndụmọdụ nke 13, nke Minista Azụmaahịa, Ruhsar Pekcan, mere, site na iji vidiyo vidiyo. Na mgbakwunye na Pekcan, ogbako ahụ; Onye isi oche TİM İsmail Gülle, DEİK President Nail Olpak, TOBB President Rifat Hisarcıklıoğlu, [More ...]
Turkey ebupụta Healthy Tourism Asambodo Mmemme
Ministri na Omenala na Nlegharị anya weputara mmemme Asambodo Na-ahụ Maka Njem Ileanya, nke ga-adị irè site n'oge ọkọchị nke 2020. N'okpuru nduzi nke Minista ahụ, yana ntinye aka nke Ministri Ahụike, Transportgbọ njem, ime na nke ndị si mba ọzọ, yana nkwado nke ndị ọrụ mpaghara niile. [More ...]
Beyoğlu Culture okporo ụzọ na-aga n'ihu
Ebumnuche nke ime ka square ebe Galata Tower bara uru karị na usoro njem na -eme ka ọ bụrụ mmalite nke ọdịbendị na ọrụ nka, ọmụmụ ndị a na-eme na Beyo Projectlu Culture Road Project, nke Ngalaba Omenala na Nleta na-eme, [More ...]
Transportgbọ njem dị mma na-abịa n'okporo ụzọ dị na Bursa
Thezọ ndị emebereghị ka ọ dị ruo ọtụtụ afọ n’ihi ọnụnọ okporo ụzọ na Bursa na-enweta nkasi obi maka usoro iwu. Obodo Bursa Metropolitan, nke meghachitere asphalt nke Merinos - ụzọ Acemler gara aga, bụ otu. [More ...]